Daraasadda Saamaynta Madaarka-Tac - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Maareynta Kobaca|Mawduucyada Maareynta Kobaca|Daraasadda Saamaynta Madaarka-Tac
Qabyo-qoraalka Daraasadda Saameynta Badda-Tac
Akhristaha Qaaliga Ah ee Xiisaha Leh:
Wasaaradda Ganacsiga (Ganacsiga) waxay ku faraxsan tahay inay soo bandhigto qabyo-qoraalka "Daraasadda Saameynta Hadda iyo Socda ee Hawlgalkii Madaarka Caalamiga ah ee Seattle-Tacoma". Waxaan ka cudurdaaraneynaa inaanan u qabanin kulan dadweyne shaqsi ahaan, sidii markii hore loo qorsheeyay, laakiin khataraha caafimaad awgood iyo tilmaamaha la xiriira awgeed waxaan siineynaa waxyaabaha soo socda si looga caawiyo dib u eegistaada Daraasadda: iyo qodobbada muhiimka ah; 1) Soo-koobidda Fulinta ee Daraasadda; 2) Daraasad buuxda oo loo kala jabiyey cutubyada (si fudud loo soo dejiyo); iyo 3) macluumaadka xiriirka ee dirista faallooyinka.
Waa maxay Daraasadu?
Kani waa dukumiinti ballaaran - in kabadan 500 bog. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad akhrido jadwalka waxyaabaha ku jira iyo soo koobista fulinta marka hore. Intaas ka dib, waad dooran kartaa oo dooran kartaa cutubyo aad xiiseyneyso ama akhrin karto warbixinta oo dhan.
Sharci dejinta Gobolka Washington waxay ku maalgelisay daraasaddan miisaaniyadda hawlgalka ee 2018 (2018 Engrossed Substitute Senate Bill ESSB 6032-Section 127 (63))
Daraasadu waxay baareysaa waxyeelada laxiriirta howlgalka Gegada Diyaaradaha-Tac Airport ee magaalooyinka SeaTac, Burien, Des Moines, Tukwila. Federal Way iyo Normandy Park laga soo bilaabo 1997 ilaa 2019.
Daraasadu waxay falanqeyneysaa saameynta togan iyo tan taban waxayna tilmaamaysaa 70 talo bixin. Qaar badan oo ka mid ah talooyinka waxay ku baaqayaan xog cusub ama daraasado.
Fursadaha fikradaha dadweynaha waxaa ka mid ahaa guddiga la talinta farsamada oo ay ku jiraan shaqaalaha magaalada iyo muwaadiniinta, qiyaastii 50 wareysi daneeyayaasha (1: 1 iyo koox yar), iyo labo aqoon isweydaarsi dadweyne.
Mashruuca Cabirka Buuqda Beacon Hill
2018 Beacon Hill Noise Team waxay soo aruurisay xogta heerarka sawaxanka ee xaafadda Beacon Hill ee Seattle. Xogtan waxaa loo isticmaalay in lagu soo buuxiyo warbixin ku saabsan sawaxanka Saadaasha Duulimaadyada Caalamiga ah ee Sea-Tac ee Beacon Hill Neighborhood. Ujeeddooyinka macluumaad ahaan waxaan u bixinaynaa Kooxda Beacon Hill Noise Team warqadda xaqiiqda iyo Warbixin.
Saameynta Saadaasha Garoonka-Tac ee Daraasadda Soo Bandhigida Muuqaalka
Soo-Koobid Fulinta Daraasadda Saameynta Saameynta Badda-Tac Airport - Qabyo
Warbixinta Daraasada Saameynta Saameynta Badda ee Madaarka-Tac - Qabyo
Jadwalka Tusmada iyo Hordhaca - Qabyo
Qaybta 2 - Taariikhda - Qabyo
Qeybta 3 Daraasada Kiiska Garoonka - Qabyo
Qaybta 4 Gelinta Bulshada - Qabyo
Qaybta 5 Buuqda iyo gariirka - Qabyo
Qaybta 6 Tayada Hawada - Qabyo
Qeybta 7 Dhaqdhaqaaqa - Qabyo
Qaybta 8 Tayada Biyaha Oogada Sare - Qabyo
Qaybta 9 Biyaha dhulka hoostiisa iyo Tayada Ciida - Qabyo
Qaybta 10 Iftiin - Qabyo
Qaybta 11 Badbaadada Dadweynaha - Qabyo
Qaybta 12 Caafimaadka Dadweynaha - Qabyo
Qaybta 13 Dhaqaale-Bulsheed - Qabyo
Qeybta 14 Soo-koobidda Natiijooyinka - Qabyo
Lifaaqa A Tixraacyo Farsamo - Qabyo
Lifaaq B Wareysiyada Daneeyeyaasha - Qabyo
Lifaaqa C Xiriirrada Mashruuca - Qabyo
Lifaaqa D Erey bixinta - Qabyo